Argagixisada xuuthiyiinta oo lagu eedayay in suuqyada ku iibiyaan dawada shuban-biyoodka - Horn Future
Argagixisada xuuthiyiinta oo lagu eedayay in suuqyada ku iibiyaan dawada shuban-biyoodka
Cadan (Horn Future)-Wasiirka maamulka gudaha ee Yemen Cabdul-raqiib Fatax ayaa ku eedeeyay argagixisada shiicada xuuthiyiinta in suuqyada madow ay ku iibiyaan daawooyinka loogu talogalay cudurka shuban-biyoodka tiro ka mid ah gobollada dalka.
Masuulkan oo sidoo kale ah guddoomiyaha guddiga sare ee gargaarka ayaa waxa waraysi uu siiyay wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee “Saba” ku sheegay in maleeshiyada argagixisada ah ay ka ganacsato dawada loogu talogalay cudurka shuban-biyoodka.
Waxa uu intaa ku daray inay ku iibiyaan suuqyada madow ee goboladda Xudeeyda,Xajja,IBB iyo Zamaar, waxana ay u diideen dadka bukaanka ah ee xaqqa u leh inay helaan.
Jimmy McGoldrick oo ah Iskuduwaha Hawlaha Bini’aadamnimo ee Yemen ayaa ka codsaday dhamaan waaxaha caafimaadka iyo ururada caalamiga ah ee ka hawlgala waaxdan inay la socdaan waxqabadka caafimaad ee gobolladda ay gacanta ku hayso maleeshiyadan.
Ururka caafimaadka ee dunida ayaa waxa warbixin uu soo saaray uu ku sheegay in tirada dhibanayaasha u dhintay cudurkan shuban-biyoodka dalka Yemen ay gaadhay 1742, korodh lagu qiyaasay 10 xaaladood oo dhimasho ah oo sida laga soo xigay ururkan Salaasadii.
« Qaybtii 5aad ee ciidamada qalabka ee ka socda dalka Turkey oo soo gaadhay imaaradda Qadar	» Lawmakers introduce impeachment article against Trump